musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Mushonga mutsva weAntiviral Oselavir Wotangwa muChina
Hetero, isangano rine mukurumbira pasi rose rakasanganiswa nemishonga pamwe neShenzhen Beimei Pharmaceuticals vakazivisa pamwe chete kuti vawana rezinesi rekutenga zvinodhaka reOseltamivir phosphate pasi pezita rechiratidzo reOselavir® kubva kuChina anodzora mishonga, National Medical Products Administration (NMPA).
Oseltamivir phosphate mushonga unorwisa mavhairasi unoshandiswa mukurapa hutachiona hwefuruwenza muvakuru, vechidiki uye vana (≥2 mavhiki ezera). Oselavir® ichaitwa kuwanikwa muChina mune dosage fomu - 12.5ml: 75mg poda yekumisa nemuromo.
WHO inofungidzira kuti furuwenza yemwaka inogona kuuraya 290,000-650,000 gore rega rega nekuda kwezvirwere zvekufema chete. Iko fungidziro haifungidzire kufa kubva kune zvimwe zvirwere zvakaita sechirwere chemoyo, chinogona kunge chine chekuita nefuruwenza1.
Dr. Vamsi Krishna Bandi, Managing Director, Hetero Group of Companies vakati, “Tinofara kuti Hetero yakabatana neShenzhen Beimei Pharmaceuticals, China, yakawana mvumo yeOselavir® (Oseltamivir) kuChina. Iyi ndiyo yekutanga kubvumidzwa kwechigadzirwa cheHetero kuChina, uye takazvipira kuunza zvimwe zvigadzirwa kuChina munguva pfupi iri kutevera. "
Mbuya Guangmei Wu, Mutungamiriri uye Mukuru weShenzhen Beimei Pharmaceuticals vakati, “Nekuvimbana uye nerutsigiro pakati pezvikwata zveBeimei neHetero, Oselavir® yakatangwa kuChina sechigadzirwa chekutanga chekuChina chakatendera Oseltamivir mufomu yedosaiti yevana. Ndinotaura kuonga kuboka reHetero nokuda kwebasa ravo rakaoma uye kushanda nesimba mubasa rose rekugadzirwa kwechigadzirwa, kushandiswa kwekunyoresa uye kutanga kugadzirira kweOselavir®. Tinotarisira kuongorora zvimwe zvigadzirwa neHetero kuitira hutano hwepasi rose hwevana mune ramangwana. "